Sevhisi - shandong Gaoqiang Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
JS-103 Yakakwira Performance PCE Amai Doro
JS-104 Compound PCE Amai Doro
BT-302 Yakakwira slump inochengeta PCE Amai Doro
BT-303 Super Slump inochengeta PCE Amai Doro
Cable Grouting Mumiriri
Wekutanga Simba Remagetsi
Flash Kugadzirisa Admxiture
Kuchengeta Mvura Mumiriri
Polycarboxylate Superplasticizer Monomer muEther mode (TPEG-HPEG)
1. Ndapota taura nemurume wekutengesa. Tinogona kukubatsira zvakanaka:
2. Pre-sale sevhisi
Ndapota titiudze chigadzirwa chaunoda kutenga. Iye wekutengesa murume anokupa iwe bvunzo mushumo negwaro pikicha kana vhidhiyo. Dzimwe dhata dzekuyedza dzinobva kuchina, dzimwe kubva kunze kwenyika.
Isu takaunganidza mamwe data kubva kune vatengi vangu. Kana iwe uri padyo chaizvo, iyo data ichave iine yakanyanya kukoshesa kukosha.
Mushure mekumisikidza odha, murume wekutengesa achakuratidza iyo yekugadzira purogiramu uye tarisa mhedzisiro yemuedzo. Uye chengetedza imwe yemuenzaniso. Muenzaniso wakacherechedzwa nezuva, zita rezvigadzirwa, nyika. Zvichava zvakanaka yakachengeterwa gore rimwe.
3. Mushure mekutengesa sevhisi
1) Nekuda kweizvi zvinhu zvemakemikari, dzimwe nguva isu hatigone kugadzirisa dambudziko online. Tinogona kubhururuka kune yako batch chirimwa uye kutaurirana neyako tekinoroji. Tine zviitiko zvakapfuma pane kongiri yekusanganisa uye batch chirimwa. Uye isu tinogona kubatsira iwe kuti uwane yakanyanya kushanda nzira pane bhizinesi.
2) Mari yekufambisa: isu tinotakura mutengo
3) Tine chirongwa chekushanya kune vatengi venguva yakareba uye mibairo yemari mutemo pagore.
Ronga: isu tiri timu yevanhu. Tinoshanda pamwe chete zvinangwa zvakafanana.
Goverana: munhu wese ane hunyanzvi hwakakosha. Regai vaite zvavo mabasa.
Dzidza: isu takagadzirira kudzidza kuitira kuti tive nekwaniso yakakodzera.
Tsvaga: isu tinoda kutsvaga tarenda kuti tibatane nesu.
Kurukura: tinokurudzira gakava pakati pevashandi. Chero mazano anobatsira kugadzirisa matambudziko nekuvandudza kugona kwebasa rechikwata zvinotorwa.
Kuchengeta: isu tinopa zvitsigiso kana vashandi vakasangana nematambudziko.
Shandong Gaoqiang New Zvekushandisa Technology Co, Ltd. inovhara 9100 mativi emamita ekuvaka nzvimbo uye mazana matanhatu emamirimita ekutsvaga kwesainzi uye murabhoritari.
Kambani yedu yakavaka yakakwana kongiri yekukanganisa yekugadzira mutsara, kemikari kuongorora uye epanyama chivakwa rabhoritari pamwe Shandong University of Kuvaka uye Beijing University of Civil Engineering, vakapakata ano zviridzwa kuti kuyera uye kuedza pamwero mukuru zviridzwa uye equipments. Kambani yedu ine yakasimba boka rekutsvaga uye rekuvandudza boka rine vanachiremba vane hunyanzvi, masters eChina Academy yeKuvaka Sayenzi.
Rabhoritari inoverengera uye iongorore zvigadzirwa zvitsva 'kugona uye kushanda kuburikidza nezvinoedzwa pane zvakanyorwa kwegore rimwe. Asi Kongiri bvunzo inofanira kuitiswa isati yashandiswa nekuda kwekusiyana kwesimende nejecha. Zvinoenderana nebasa redu rekutengesa, isu tinopa mahara pa_site technical technical kana zvichidikanwa.
Concrete kusanganiswa: yemahara
Nguva: sampuro inotumirwa mumazuva maviri mushure mekunge tagamuchira iyo inodhura mutengo
Rongedza: chena HDPE bhodhoro
Taura: DHL kana FEDEX
Express mutengo: nemutengi
Bumbiro: kana bhuku remutengi zvinhu zvedu, iyo inodhura mutengo yakamboitika ichaverengerwa sechikamu chekukosha.
1. kugamuchirwa shanyira fekitori yangu
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvangu ndapota uya kuChina uye shanyira kambani yangu. Isu tinokuratidza maitiro ekugadzira uye ita bvunzo iwe yaunoda kuti uone. ndokumbirawo utore mimwe mienzaniso paunodzoka wozoita test nesimende rako nejecha rako.
Hotera: tinokubhukiridzira hotera yacho iwe.
Mari Yekufambisa:mutengo wekufamba uchaverengerwa sechikamu chezvinhu kana iwe uchiverenga zvinhu zvedu. isu tine kutenda pane zvigadzirwa zvangu nekuti isu takaita zvakawanda tichienzanisa nevakawanda vavo vari munyika.
2. Tichashanyira kambani yako
Nekuda kweizvi zvinhu zvemakemikari, dzimwe nguva hatigone kugadzirisa dambudziko online. Tinogona kubhururuka kune yako batch chirimwa uye kutaurirana neyako tekinoroji. Tine zviitiko zvakapfuma pane kongiri yekusanganisa uye batch chirimwa. Uye isu tinogona kubatsira iwe kuti uwane yakanyanya kushanda nzira pane bhizinesi.
Mari yekufambisa: isu tinotakura mutengo kana iwe uchiverenga zvinhu zvedu.
Tine hurongwa hwekushanya kune vatengi venguva yakareba uye mutemo wemubairo wezvemari gore rega.
1.liquid mhando polycarboxylate superplasticizer
1) IBC tangi 1000kg kusvika 1200kg imwe neimwe, 1 × 20 'mudziyo unogona kutora makumi maviri pcs IBC tangi, Chinyorwa chinogona kunge chiri chikumbiro
2) flexi tangi: 20000kg kusvika 24000kg imwe neimwe, 1 × 20 'mudziyo unogona kutora 1 pc flexi tank, Lable inogona kunge iri kukumbira
Mazuva maviri kusvika mashanu mushure mekugamuchira dhipoziti
1. TT 30% dhipoziti, uye 70% chiyero afer uchiona kopi yeBL
2. Isingachinjiki LC pakuona
Shandong Gaoqiang Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
Runhare: +86 18353997870